March | 2014 | ဂန္တ၀င် | Page 2
Nan Su Yati Soe (http://www.nansuyatisoe.com/)
Nan Su Yati Soe ဆိုဒ်သည် နန်းစုရတီစိုး ကိုယ်တိုင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Nan Su Yati Soe ဆိုဒ်တွင် နန်းစုတစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နန်းစုရိုက်ကူးခဲ့သော အလှဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ဇာတ်ကားများအား စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ နန်းစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ...
Music Mania (http://chitmusicstation.blogspot.com)
Music Mania @ Chit Music Station ဆိုဒ်သည် မြန်မာ မင်းသား၊ မင်းသမီးများ၊ အဆိုတော်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ လူရွှင်တော်များ၊ စာရေးဆရာများ စသော မြန်မာနိုင်ငံရှိ အနုပညာရှင်များရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်လင့်များးကို စုံလင်စွာ တစ်ခုတစ်စည်းဖော်ပြသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Music Mania @...
Myanmar Daily Star (http://www.mmdailystar.com)
Myanmar Daily Star ဆိုဒ်သည် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူပေါင်း (၇,၄၅၄,၁၃၈) ဦးရေးရှိပြီး အောင်မြင်သော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Myanmar Daily Star ဆိုဒ်တွင် အနုပညာရှင်များရဲ့ ဆောင်းပါးများသာမက အားကစား၊ ကျန်းမာရေး၊ နည်းပညာ၊ ဆင်ခြင်စရာ၊ တိုက်ပွဲ သတင်း၊ ကြေငြာချက်များ၊ ဘင်္ဂလီသတင်း၊ ရသ...
လှပတဲ့အသားအရေနဲ့ ဆံနွယ်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ထူးကဲကောင်းမွန်သော စားစရာ(၁၀)မျိုး
GandaWinAdmin - Mar 2, 2014
သဘာဝအလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးက သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစားအသောက်ကို စားသုံးခြင်းပါပဲ။ မျှတတဲ့အစားအသောက်တွေထဲကမှ အသားအရေ နှင့် ဆံကေသာ အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာ (၁၀) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သစ်ကြားသီး သစ်ကြားသီးလေးတွေကတော့ အိုမီဂါသရီး ဖက်တီးအက်ဆစ်(omega-3 fatty acids), ဘိုင်အိုတင်(biotin), ဗီတာမင် အီး(vitamin...
E Trade Myanmar (http://www.etrademyanmar.com.mm/)
E-Trade Myanmar Co.,Ltdသည် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်ပယ်အတွင်းထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ e-Trade Myanmar Co.,Ltdသည် မြန်မာစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် သတင်းဆိုဒ်များတည်ထောင်ပေးခြင်း၊ အင်တာနက် ကွန်ယက်ပေါ်တွင် ကုမ္ပဏီများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မြန်မာစီးပွားရေးဈေးကွက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုစာတိုပို့စနစ်အသုံးပြုကာသတင်းဖြန့်ချီပေးခြင်း၊ နည်းပညာအကူညီဖြင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ အင်တာနက်ပေါ်မှ ငွေပေးချေစနစ်များဝန်ဆောင်ပေးခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများပိုင် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်သောဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Link: http://www.etrademyanmar.com.mm E-Trade Myanmar E-Trade Myanmar Co.,Ltd...
Estate Yangon (http://www.estateyangon.com)
Estate Yangon သည် မြန်မာစီးပွားရှင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများပေးသောမြန်မာအွန်လိုင်းဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Estate Yangon သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် မြန်မာစက်မှုဇုံတည်ထောင်မှုတွင် ရင်းနှီးမြုနှံလိုသူများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ Estate Yangon သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရန် ရုံးခန်းဖွင့်လိုသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက် နေရာကောင်းများကိုလည်းဝန်ဆောင်ပေးသည်။ Link: http://www.estateyangon.com Estate Yangon Estate Yangon specializes...
မဟာဘုတ်ဗေဒင်ဆိုဒ်တွင် မြန်မာခေတ်လူငယ်များအတွက် အချစ်ရေးမှာဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ၊ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများအကြောင်း၊ နာမည်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ၊ အတွေးအမြင်စာစုများ၊ ယတြာအစီအရင်များ၊ အခန်းဆက် ဝတ္ထုရှည်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ကဗျာများ၊ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကိုလည်းသေချာရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။အွန်လိုင်းတွင် မြန်မာဗေဒင် မေးသူများအဆင်ပြေရန်အတွက် အချိန်တိုအတွင်းအကြောင်းပြန်ပေးသောဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Link: http://www.mahabote.org/ Maha Bote Mahabote isaBurmese Horoscope Website. Mahabote...
Myanmar Astro Research Breau (http://www.myanmarastro.com/)
Myanmar Astro Research Bureau (မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့) ဆိုဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဗေဒင်ဆရာများ၊ ဗေဒင်ပညာကိုလေ့လာလိုက်စားနေသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။၁၂ရာသီခွင်များ အတွက် ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ လအလိုက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကိုသေချာစနစ်တကျ တွက်ချက်ဖော်ပြထားပေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်အလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းအတက်အကျများ၊ မင်္ဂလာအခါရက်များကိုလည်းသေချာတွက်ချက်ဖော်ပြပေးထားသည်။ထူးခြားချက်မှာရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းအားအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ Link: http://www.myanmarastro.com/ Myanmar Astro Research Bureau Myanmar Astro Research...
Young Gun (http://www.myastroview.com/)
Young Gun, My Astro View (ရောဂန်)ဆိုဒ်သည် အဓိကအားဖြင့် အွန်လိုင်းတွင် ဖုန်းဖြင့် ဗေဒင်မေးများသည့် ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ၁၂ရာသီဖွားများအတွက် လစဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ၊ ဗေဒင်ချစ်သူများအတွက် ဖုန်းဖြင့် အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ရန် ဗေဒင် ဆော့ဝဲများ၊ မြန်မာ့ နာမည်ကြီးဗေဒင်ဆရာများရဲ့ ဆိုဒ်လိပ်စာလင့်များ၊ ဗေဒင်ပညာရပ်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့် ဖော်ပြထားသောဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။...
မိုးတာဆိုဒ်တွင် ယနေ့ နာမည်ကြီးနေသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ၊ ပြည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ သမိုင်းကြောင်းတွင် ကျော်ကြားခဲ့သောသူများအကြောင်းကိုမိုးတားနည်းပညာ(သိပ္ပံနည်းကျ နက္ခတ္တပညာရပ်) ဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသထားသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်အစုံအလင်ကိုလည်းမိုးတားနည်းပညာဖြင့် ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြား ပြလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးပဟေဠိနှင့် ခေတ်သစ် နည်းပညာဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုမျိုး ဖြစ်သည်။ မိုးတားနည်းပညာဖြင့် နာမည်ပေးခြင်း၊ ...
Myanmar Astrology (မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်နှင့်နက္ခတ်)ဆိုဒ်တွင် နက္ခတ်ဆိုင်ရာအသိပညာများ၊ မဟာဘုတ်ဗေဒင်၊ တားရော့ပညာရပ်များ၊ ဗေဒင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ၊ ၁၂ရာသီဖွားများအတွက် လအလိုက်ဗေဒင်များ၊ မိသားစုယတြာများ၊ ခုနှစ်ရက်သားသမီးအတွက် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ၊ ဗေဒင်နဲ့ ပက်သက်သောဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။ Link: http://www.mmastrology.com Myanmar Astrology Myanmar Astrology isaBurmese Horoscope Website. It...
Dr Tin Bo Bo (http://compubaydathukhuma.blogspot.in/)
ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ် (နာမည်ပေး နှင့် ဟူးရားနက္ခတ် ကျွမ်းကျင်သူ) သည် ကွန်ပျူတာဗေဒင် စနစ်ဖြင့် ကျော်ကြားအောင်မြင်လာသူ ဖြစ်သည်။ ဆရာတင်ဗိုလ်ဗိုလ် ဆိုဒ်တွင် တစ်လစာ မြန်မာဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ၊ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် နေ့အလိုက်ဟောစာတမ်းများ၊ ရာသီခွင်အလိုက် အမူအကျင့်များ၊ ဘဝဒဿန စာပေများ၊ ဗဟုသုတများစသဖြင့် အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုကဏ္ဍအလိုက် စုံလင်စွာဖော်ပြပေးထားသည်။ Link: http://compubaydathukhuma.blogspot.in/ Dr Tin...
Saya Heigh Think Zaw, ဆရာဟိန်းတင့်ဇော်ဆိုဒ်တွင် (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဗေဒင်၊ ယတြာ၊ ဂမ္ဘီရအတတ်၊ အဓိဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်နည်းများကိုဖော်ပြပေးသောမြန်မာဗေဒင်ဟောစာတမ်းဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိသားစုယတြာ၊ စီးပွားရေးယတြာ၊ ခေတ်လူငယ်များအတွက် အချစ်ရေးယတြာ၊ ငွေကြေးယတြာ၊ သားသမီးရေးယတြာ၊ အိမ်ထောင်ရေးယတြာ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပက်သက်သောယတြာများကိုလည်းဖော်ပြပေးထားသည်။ အွန်လိုင်းဗေဒင်ချစ်သူများအတွက်လည်းအချိန်တိုအတွင်းမေးမြန်းလာသမျှကိုဖြေကြားပေးလေ့ရှိသည်။ ဗေဒင်ပညာရပ်များကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်လည်းကျင့်စဉ်များ၊ ပညာရပ်များကိုဖော်ပြပေးထားသည်။ မြန်မာ့ စာပေလောကရှိရှားပါးစာပေများ၊ တစ်ခြားသောစာအုပ်များကိုလည်းဆိုဒ်အောက်ခြေတွင် အလွယ်တကူဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူနိုင်ရန်...
Burmese Classic (http://www.burmeseclassic.com/baydin1.php)
Burmese Classic Webpage ၌ဆရာကြီး ဒေါက်တာမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ရင်းဆန်းဗေဒင် အင်္ဂလက္ခဏာပညာရှင်ဆရာထွန်းမှ ရေးဆပ်တင်ပြသောခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် မြန်မာအပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်သည်။Burmese Classic ၌ကံကြမ္မာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မေးမြန်းလိုသော မေးခွန်းများကို ဆရာထွန်းထံသို့ sayartun@burmeseclassic.com သို့ရေးသားမေးမြန်းနိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။ Link: http://www.burmeseclassic.com/baydin1.php Burmese Classic, Horoscope Burmese Classic Webpage provides...
The Irrawaddy (http://www.irrawaddy.org/business)
The Irrawaddy (ဧရာဝတီဆိုဒ်)ရဲ့ အဓိကဦးတည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင် အာရှတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောသတင်းများကို တိကျစွာနှင့် မျက်နှာမလိုကဘဲ ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ရေးသားရာတွင်အသေးစိတ်လေ့လာပြီးမှ ရေးသားဖော်ပြသဖြင့် ခိုင်လုံမှုရှိပြီးယုံကြည်ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များကို နိုင်ငံတကာမှ အမြင်များဖြင့် ရေးသားတင်ပြပေးသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် The Irrawaddy...
The Economist (http://www.economist.com/topics/myanmar)
The Economist ဆိုဒ်သည် ပြည်တွင်း ပြည်ပသတင်းအချက်အလက်များ၊ မှုခင်းသတင်းများ၊ စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာအစရှိသည်တို့အားစုံလင်စွာဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေ့စဉ် သတင်းအသစ်များ၊ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများကိုThe Economistဆိုဒ်တွင် စုံလင်စွာဖတ်နိုင်သည်။ Link: http://www.economist.com/topics/myanmar The Economist, Myanmar The Economist online offers insight and opinion...
Saw Aye Kyaw (http://sawayekyaw.blogspot.com/)
Saw Aye Kyaw ဆိုဒ်တွင် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ၊ မြန်မာ အီးဘုတ်များ၊ အခွေများ၊ သီချင်းများ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဆော့ဝဲများ၊ ဟတ်ဝဲများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ စသဖြင့် စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ Saw Aye Kyaw ဆိုဒ်တွင် လက်ကွက်ကျင့်ရန် လိုအပ်တာများ...